Qaramada Midoobay oo berri Washington shir ugu qabanaysa saraakiil ka tirsanaa milatariga Soomaaliya. [Akhris …] – Radio Daljir
Qaramada Midoobay oo berri Washington shir ugu qabanaysa saraakiil ka tirsanaa milatariga Soomaaliya. [Akhris …]
Luulyo 31, 2009 12:00 b 0
Washington, July 31 – Maalinta berri ah ayaa lagu wadaa in kulan shan maalmood socon doona oo lagu gorfayn doono qaabdhismeedka milatariga Soomaaliya uu ka furmo magaalada Washington ee xarunta Maraykanka.
Kulankan oo uu soo qabanqaabiyay xafiiska jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa dhinaca siyaasadda ugu aaddan Soomaaliya isla markaana uu guddoominayo ergeyga Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Axmad Walad Cabdalla ayaa waxaa ka qayb galaya saraakiil sarsare oo milatari ah oo Soomaali ah.
Kulankan dawladda Soomaaliya waxaa uga qayb galaya wasiirkeeda Gaashaandhigga.
Shirkan ayaa waxaa la sheegey in uu taageero buuxa ka haysto Qaramada Midoobay, Maraykanka, Midowga Yurub iyo Midowga Afrika, waana markii labaad ee saraakiil milatari oo Soomaali ah oo ay taageereyso qaramada midoobay ay ka shiraan dib u dhiska ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed.
Dhawaan ayay ahayd markii uu madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sh Axmed uu yididiillo wayn ka muujiyay in ay dowladdiisu ku guulaysato dhismaha ciidan qaran oo u istaaga difaaca dowladnimo.
Puntland oo looga dabaaldegay sanadguuradeedii 11-aad ee dhismaha Puntland. [Akhris …]
Munaasabad lagu xusayo 1-da Ogoosto ee yagleekii Puntland oo 1-da bisha ka dhici doonta Columbus, OH. [Akhris …]